मिर्गौलाको पत्थरिका बिरामीका लागि खुसीको खबर,पालुंगो खानुस्,मिर्गौलाको पत्थरी हटाउनुस – Tufan Media News
मिर्गौलाको पत्थरिका बिरामीका लागि खुसीको खबर,पालुंगो खानुस्,मिर्गौलाको पत्थरी हटाउनुस
६ मंसिर २०७६, शुक्रबार २०:४१
पालुंगोको साग खानमा मात्र स्वादिलो हुँदैन यो स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायी हुन्छ । यसको सेवनले शरीरमा रगतको कमी भएकाहरुका लागि मात्र पालुंगो हितकारी हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छ । तर यसका अन्य औषधिय गुणको बारेमा भने कमैलाई थाहा होला । पालुंगोको सागमा अन्य धेरै पौष्टिक तत्वहरु पाइन्छन् जुन शरीरलाई अत्यावश्यक हुन्छ ।
१ सय ग्राम पालुंगोको सागमा २६ किलो क्यालरी उर्जा पाइन्छ ।पालुंगोको सागमा २ प्रतिशत प्रोटिन, २.९ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, पाइन्छ । त्यस्तै जम्मा ०.७ प्रतिशत चिल्लो, ०.७ प्रतिशत लवण तथा ०.६ प्रतिशत फाइबर पाइन्छ । पालुंगोको सागमा क्याल्सियम, फलाम मात्र होइन भिटामिन ए, बी, सी जस्ता विभिन्न भिटामिन समेत पाइन्छ । त्यसैले पालुंगोलाई जिउको संरक्षक खाद्य पदार्थ समेत भनिन्छ ।
पालुंगोको सागको रसलाई नियमित रुपमा नरिवल पानीमा मिलाएर हरेक विहान पिउनाले मिर्गौलामा परेको पत्थरी हटाउन मद्दत पुग्छ । पालुंगोको सागको रसमा सिधेनुन मिलाएर नियमित पिउनाले दम तथा स्वास प्रस्वासका रोगीलाई फाइदा पुग्छ । नियमित रुपमा पालुंगोको साग खानाले कारण स्मरण शक्ति बढ्ने र आयोडिनका कारण दिमागी थकान समेत कम हुन्छ ।
जण्डिसका रोगीले पालुंगोको साथ काँचै चपाउनु समेत निकै फाइदाजनक हुन्छ । रक्तचाप कम हुने समस्या भएकाहरुले दिनहुँ पालुंगोको साग सेवन गर्नुपर्छ । थाइराइडको समस्या भएका ब्यक्तिहरुका लागि समेत पालुंगोको सागको सेवनले फाइदा गर्छ ।
काठमाडौं- नेपाली भूमि आफ्नैतिर पारेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको २० दिन भइसक्यो। नेपाली भूमि कालापानी (लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेत) छिमेकीले हडपेपछि नेपालीहरूको भारतप्रति आक्रोस तीव्र बनेको छ।
यो अवधिमा सरकारले ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय मान्य हुँदैन’ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको रक्षा गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको’ भन्ने व्यहोराको विज्ञप्ति जारी गर्नु बाहेक महसुस हुनेगरी कुनै कूटनीतिक कदम चालेको छैन।
सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता गराउन कूटनीतिक अग्रसरता नदेखाएको महसुस गरेरै होला सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले १ मंसिरमा आक्रोसमिश्रित ट्वीट गरिन्।
‘सिमाबारे सरकारका मन्त्रीले भाषण गर्दै हिँड्ने की त्यो देशको राजदूतलाई बोलाएर सोध्ने?’ झाक्रीको प्रश्न थियो, ‘बक्तव्य निकाल्ने की? मन्त्रिपरिषद्ले तुरून्त आफ्नो राजदूत मार्फत ध्यानाकर्षण गराउने? कूटनीतिक पहल गर्न आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने? वा हामी हाम्रो भूमी एक इन्च पनि मिच्न दिन्नौं भन्ने बेतुकको भाषण दिने?’